ကြည်းတပ်အမျိုးသားများအတွက်: အ Gamecube အပေါ် RTS cheat
ဂိမ်း ကို Nintendo
ကြည်းတပ်အမျိုးသားများအတွက်: Gamecube များအတွက် RTS cheat
ကြည်းတပ်အမျိုးသားများအဘို့အ cheat: အ Gamecube အပေါ် RTS
အောက်ပါ cheat, codes တွေကို, နှင့် လျှို့ဝှက်ချက်များကို တပ်မတော်အမျိုးသားများအဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်: RTS မဟာဗျူဟာဗီဒီယိုဂိမ်း ဟာကို Nintendo Gamecube ဗီဒီယိုဂိမ်း console ကိုအပေါ်။ သင်တို့သည်လည်းတပ်မတော်အမျိုးသားများကိုရှာဖွေနိုင်သည် RTS ဟာ PlayStation2တို့အတွက် cheats ။
စူပါစစ်သား: ဂိမ်းကာလအတွင်း Down Hold နှင့်စာနယ်ဇင်း B က (2), A, Y ကို, A, B ။ တစ်ဦးကအသံသည်မှန်ကန်သောကုဒ် entry ကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
စူပါရန်သူစစ်သား: ဂိမ်းကာလအတွင်း Down Hold နှင့်စာနယ်ဇင်း Y ကို (2), A, B, Y ကို (2) ။ တစ်ဦးကအသံသည်မှန်ကန်သောကုဒ် entry ကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
2000 လျှပ်စစ်မီး: ဂိမ်းကာလအတွင်း Down Hold နှင့်စာနယ်ဇင်း Y ကို, B, X ကို, တစ်ဦးက, Y ကို, တစ်ဦးက။ တစ်ဦးကအသံသည်မှန်ကန်သောကုဒ် entry ကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
5000 ပလတ်စတစ်: ဂိမ်းကာလအတွင်း Down Hold နှင့်စာနယ်ဇင်း Y ကို, X ကို, B, A, Y ကို, B, ။ တစ်ဦးကအသံသည်မှန်ကန်သောကုဒ် entry ကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
လေထီး: ဂိမ်းကာလအတွင်း (2) Down Hold နှင့်စာနယ်ဇင်းက X, B, X ကို, B, Y ကို။ တစ်ဦးကအသံသည်မှန်ကန်သောကုဒ် entry ကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။ မှတ်ချက်: ဤသာအဆငျ့နှုန်းတစ်ကြိမ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အပိုအမှိုက်ပုံထရပ်ကားအရင်းအမြစ်များကို: Down Hold နှင့်စာနယ်ဇင်း B က (3), Y ကို, X ကို, တစ်ဦးကဂိမ်းကာလအတွင်း။ တစ်ဦးကအသံသည်မှန်ကန်သောကုဒ် entry ကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
အစိမ်းရောင်တပ်မတော်အပြာဖြစ်ပါသည်: ဂိမ်းကာလအတွင်း (2), A, X ကို B ကို, Down Hold နှင့်စာနယ်ဇင်း B, Y ကို။ တစ်ဦးကအသံသည်မှန်ကန်သောကုဒ် entry ကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
Tan ကစစ်တပ်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါသည်: ဂိမ်းကာလအတွင်း Down Hold နှင့်စာနယ်ဇင်း Y ကို (2), A, B, Y ကို (2) ။ တစ်ဦးကအသံသည်မှန်ကန်သောကုဒ် entry ကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့စစ်သားကိုသတ်: ဂိမ်းကာလအတွင်း Down Hold နှင့်စာနယ်ဇင်း B, Y ကို, လက်ဝဲ (2), Y ကို, B, ။ တစ်ဦးကအသံသည်မှန်ကန်သောကုဒ် entry ကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
alternate menu ကိုနောက်ခံ: 31 ရွှေတံဆိပ်ကိုရယူလိုက်ပါ
အရိပ်အမြွက်: သူတို့ကိုရင်ဆိုင်ခြင်းခင်မှာ Base နှင့်ယောက်ျား Locate
သည် "Build" menu ကိုသွားပါ။ မည်သည့်အဆောက်အဦးကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ကသူတို့ကိုနေရာချလို့မရပါဘူးဘယ်မှာအနီရောင်ရင်ပြင်တွေ့တိုင်အောင်လှည့်ပတ်ရွှေ့ပါ။
အရိပ်အမြွက်: ပလတ်စတစ်၏လက်သီးဆုပ်အပြည့်အဝ: လွယ်ကူစွာပြီးစီး
က "5000 ပလတ်စတစ်" ကုဒ်အကြိမ်အနည်းငယ် Enable လုပ်ထားပါ။ လေးငါး Barracks တည်ဆောက်ထားတဲ့ HQn Build ။ အဆိုပါ HQn အဆိုပါ Barracks upgrade Upgrade ။ Bazooka ယောက်ျားနှင့်စက်ဂန်းနားအောင်တခြားသူတွေအောင်နှစ်ခု Barracks ရှိသည်။ သငျသညျ (အကြောင်းကိုတဆယ်) မြင့်သောလုပ်ချင်သောငွေပမာဏကိုလုပ်ပါ။ ရွာသူရွာသား၏ပထမအုပ်စုသည်ရွာအရွက်သည့်အခါသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အားလုံးကိုသင့်ရဲ့တပ်ဖွဲ့များနှင့်သူရဲကောင်းများပေးပို့ပါ။ အနည်းငယ်ရှေ့သို့ရွာသား Walk နှင့်ကားလမ်းအနီးအားလုံး Tan ကထွက်ယူပါ။ ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့ထုတ်ယူခြင်းအချက်ကြောင့်စေသည်ပြီးနောက်, (လာမယ့်မြို့မှ) ပြန်လမ်း၏အစဖို့သင့်ပထမအုပ်စုပေးပို့ပါ။ ထိုကာလအားဖြင့်, သင်စက်ဂန်းနား / Bazooka အမျိုးသားများ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုဖန်ဆင်းရပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ခု Tan ကခြေစွပ်တ (ရွာသားတွေကာကွယ်ပေးရန်စေလွှတ်ပထမအုပ်စု မှလွဲ. ) သူတို့အားလုံးကိုရွေးချယ်ပါ။ သူတို့ကစင်မြင့်၏အလယ်၏အနောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါ Tan ကပိုပြီးယောက်ျားသို့မဟုတ်စက်တွေစေမနိုင်နိုင်အောင်ခြေစွပ်ကိုဖွိုဖကျြ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယောက်ျား၏ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူရွာသားတွေကကာကွယ်ပေးသည်။ သငျသညျခြေစွပ်တဦးကိုဖကျြဆီးပွီးနောကျ, မဖကျြဆီးဖို့နောက်ဆုံးအခြေစိုက်စခန်းကိုရန်သင့်ယောက်ျား (နှင့်ကြပြီသောသစ်တွေ) ၏အားလုံးပေးပို့ပါ။
ထို့နောက်သင့်ရဲ့ယောက်ျားမဆိုကျန်ရှိသောတန်များအတွက်လမ်းပတ်လည်ရှိဧရိယာရှာဖွေရှိသည်။ မှတ်ချက်: အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသောခြေရင်းကိုဖျက်ဆီးဖို့ခက်ခဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တစ်တန်းလျားအဖြစ်တစ်ကားဂိုဒေါင်ရှိပါတယ်။
အရိပ်အမြွက်: တစ်ခုမှာက Man ကြည်းတပ်: ကြည်းတပ်အမျိုးသားများအတွက် RTS
ရည်ညွှန်း: အနည်းငယ်ယူနစ်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့် Tan ကအခြေစိုက်စခန်းတည်ရှိရာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ပါ။ ဆန္ဒရှိလျှင်ကကိုဖွိုဖကျြ။ နီးပါးကို "X" ကိုမြေပုံပေါ်တွင်ရှိရာလမ်းမှလမ်းကိုပိတ်ဆို့သောအရာ၏လက်ဝဲဘက်ဖွင့်လှစ်သွားပါ။ သင်တစ်ဦးလက်နက်တိုးတက်မှုပါဝါ-Up ကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ လိုအပ်လျှင်, ရယူပါ။ သင့်ရဲ့ယူနစ်ကိုသင်အာဏာထရှိရာသူတို့အား tan ခေါင်းအုံးအမှုအရာများ၏ရှေ့မှောက်၌အနည်းငယ်ရပ်နေနေကြသည်နေစဉ်, သငျသညျထိပ်ပေါ်မှာနေ့လည်စာ box ကိုအတူတက် stacked အနည်းငယ်ကျောင်းကို Binder ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပေမည်။ သင့်အနေဖြင့်ရှုမြင်ပိုမိုမြင့်မားရရနျလိုအပျနိုငျသညျ။ သငျသညျမြင်ပြီးတာနဲ့သင်ကကြည်းတပ်အမျိုးသားများအတွက် RTS အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတိုက်ခိုက်နေသည့်အစိမ်းရောင်နှင့် Tan စစ်တပ်ယောက်ျားစစ်သား၏ရုပ်ပုံကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်ခံအသံမြည်ခြင်းအခြို့သောစစ်သားများနှင့်အတူစကားများသေဆုံးနေကွဲပြားခြားနားသောကပြောပါတယ်။ တစ်ယူနစ်ကွယ်လွန်အခါတိုင်းတစ်ဦးအသံ "ယူနစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ" လို့ပြောပါတယ်။ အမည်များနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သော Riff, Sarge နှင့်အခြားစစ်သားများအဖြစ်တစ်ယောက်ယောက်ကိုသေဆုံးအခါတိုင်းသို့သော်, စကားသံကို "လူကိုဆင်း!" ပြောပါတယ်
အဘယ်သို့ငါတစ် Scratch ကို Nintendo 3DS မျက်နှာပြင်ပြင်နိုင်ပါသလား?
အဆိုပါထိပ်တန်း5ဦးပျောက်ဆုံးနေ Wii ဂိမ်းများ
Wii U အားကစားပြိုင်ပွဲကောလဟာလစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - အတည်မပြုနိုင်သောဂိမ်းများ၏စာရင်း
Wii Homebrew အသုံးပြုခြင်းအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် cheat သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
DSI အပေါ်ကို Wi-Fi ကို Set Up လုပ်နည်း
1080p အတွက်တချို့က Wii U ဂိမ်းများကို Run
ကို Nintendo 3DS ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသက်သေခံနံပါတ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
ငါ Homebrew Installed ဖူးလျှင်အဘယ်သို့ငါ Wii ချန်နယ်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါသလား?
Google ကဖုန်း: အဆိုပါ Pixel လိုင်းမှာတစ်ဦးကမျှော်
သင့်ရဲ့အိတ်ဆောင် Wi-Fi ကို Hotspot Secure လုပ်နည်း
Facebook က Profile ကို, စာမျက်နှာနှင့် Group မှကွာခြားချက်များ
Linksys WRT120N ပုံမှန် Password ကို
Timehop ​​year ago ကနေသင်ကသင့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာရေးသားချက်များဖော်ပြပေး
အားလုံးအဆိုပါ Apple က iPhone အတွက် X ကိုအကြောင်း
ပျောက်ဆုံးသွားသောသို့မဟုတ်ခိုး iPhone ပေါ်မှာဒေတာများကိုကာကွယ်ပါလုပ်နည်း
2018 ခုနှစ်တွင် Buy ဖို့7အကောင်းဆုံး Yamaha Speakers
2018 ခုနှစ်တွင် Buy မှ6အကောင်းဆုံး BlackBerry ကိုဖုန်း
တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ် batch အတွက် Flickr ကိုဓါတ်ပုံများ Download
သင့်ရဲ့ iPad ပေါ်တွင် multitasking ဟနျအမူအရာအသုံးပြုခြင်း
Monophonic, Stereophonic နှင့်ပတ်ပတ်လည်အသံကွာခြားချက်များ
သည် HTTP Status ကိုကုဒ်များ
Roxio Toast 10 တိုက်တေနီယမ်
သင့်ရဲ့ WordPress ကိုကွန်ယက်ပေါ်တစ်ဦးက New ဆိုက်ကို Create
ရေကိုခံနိုင်ရည်ကို Android ဖုန်းများ
အနီရောင်အဖွဲ့ခွဲ: ပြောက်ကျား Cheats -, Xbox 360
First-မျိုးဆက် iPhone ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Programs ကို Windows မှာ Startup မှာ Loading တားဆီး